नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको नाफा ११८ % बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी रू. १०४.६५
वैशाख २०, काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ११८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ११ करोड ३८ लाख नाफा कमाएको उक्त कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि गरेर रू. २४ करोड ९१ लाख ६० हजार पुर्‍याएको छ ।चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी १०५ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ११८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चुक्तापूँजी रू. ३१ करोड ९४ लाख ९५ हजार रहेको उक्त कम्पनीले जगेडामा रू. ३८ करोड ३७ लाख ६९ हजार सञ्चित गरेको छ ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ४ अर्ब ६७ करोड ७ लाख सापटि लिएर, रू. २ अर्ब ८० लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. ७ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख कर्जा लगानी गरेको छ ।
सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १०४ दशमलव ६५, मूल्य आम्दानी अनुपात ३१ दशमलव ९९ गुणा,तरलता अनुपात ४ दशमलव ८८ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २२० दशमलव १२ पुगेको छ ।
आकर्षक मुनाफा आर्जन गरेसँगै कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३ हजार ५२५ पुगेको छ ।